Nooca alaab-qeybiyeha iyo soosaarayaasha OEM Jiwei
Ⅰ. Nooca Aamusan ee Jabiyaha Haydarooliga Hordhac
HMB nooca aamusnaanta sanduuqa aamusnaanta ayaa loo doortay codka hoose iyo ilaalinta deegaanka.
Haysashada hal-abuurnimo had iyo jeer waxay ahayd mabda 'YanTai JiWei Qalabka Mashiinka Dhismaha Qalabka, Waxaan nahay soo saare lagu kalsoonaan karo. Tayadayada gaarka ah & waxtarka sare ee soo saarista ku xirnaanta fiilada korantada waxaa aqoonsaday macaamiisheena caalamiga ah
Waa maxay HMB sanduuqa Haydarooliga jebiyaha fcunnada?
1. Heerka dhawaaqa hooseeya
2. Guri wada xiran oo buuxa si loo ilaaliyo jirka weyn
1. Soo saaraha baaldi-soo-saaraha sare ee Shiinaha, waxaan leenahay warshad noo gaar ah iyo 12 sano oo khibrad wax soo saar ah.
3. Waxaa jira koox u heellan QC, tayada ayaa raacaysa heerar adag oo caalami ah, waxayna dhaaftay shahaadada CE.
4. Badeecadu waxay leedahay damaanad hal sano ah, waxay bixisaa adeegyo hagitaan khadka tooska ah iyo khadka tooska ah ah, iyo koox xirfadlayaal ah iibka kadib.
5. Taageerida OEM / adeegga loo habeeyay.
7. muddo dheer adoo adeegsanaya nolol iyo saameyn xoog leh. Tiknoolajiyadda Korea.
Haysashada hal-abuurnimo had iyo jeer waxay ahayd mabda'a YanTai JiWei Qalabka Mashiinka Qalabka Co., Ltd .. Lifaaq Awood leh oo heer sare ah! Waxaa laga soo saaray waxyaabaha ugufiican, qiimaheena dubbeerka Haydarooliga wuxuu la yimaadaa tayo iyo adkeysi gaar ah.Markuu kormeerayo alaabada la soo gabagabeeyay, YanTai JiWei Qalabka Mashiinka Dhismaha Qalabka, Ltd. waxay raacdaa heerarka ugu adag ee warshadaha. Wax soo saarkayagu waligood kaa hoos marin maayaan xagga shaqeynta iyo adkeysiga.
Haddii aad baahi qabto, waad nala soo xiriiri kartaa waqti kasta fadlan.
Hore: nooca dhinaca
Xiga: Nooca ugu sareeya